I-Boutique Hideaway e-"Cultural Capital" yaseLatvia - I-Airbnb
I-Boutique Hideaway e-"Cultural Capital" yaseLatvia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Andzs
U-Andzs Ungumbungazi ovelele
Indawo yokucasha yomndeni wethu etholakala e-Cesis futhi nezinyathelo ezimbalwa nje ukusuka e-Gauja National Park izokujabulisa 'nge-hygge' yayo ye-Nordic. Itholakala emaphethelweni edolobha anamagquma futhi izungezwe imvelo, uzojabulela izinsiza zesimanje ngenkathi uzizwa umakiwe. Jabulela ikhofi lakho lasekuseni ngenkathi ulalele imisindo yezinyoni nomfudlana omncane, phumula ku-hammock ngaphakathi kwensimu yama-apula noma phuza ingilazi yakho yewayini phambi kweziko.
Sithemba ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho njengoba senza.
Indlu yethu ineminyaka engaba ngu-100 ubudala futhi kwaqashelwa izici zayo zangempela ngesikhathi sokulungiswa. Ithala elingaphandle, indlu ye-sauna yesimanje enompheme wayo kanye nobhavu oshisayo (izinkuni ezishisiwe) kanye nesibaya esidala sihambisana nesakhiwo esingokomlando.
Esikhundleni sokungajwayelekile eLatvia, uzozithola usemthambekeni okuvumela ukuthi uthole indawo yokufunda, uphumule, uphupha emini noma udlale "ngamazinga" ahlukene. Ungase ufise ukukhetha umpheme owengeziwe, i-mini birch grove, indawo enotshani phezulu kwesakhiwo, noma ubuke ukuthi ubani ovakasha ngaphezu nje kwendlu.
Sinezingane ezintathu ezineminyaka engaphansi kwemihlanu futhi zithanda indawo yethu njengoba senza. Indawo yethu ifakwe imibhede yezingane ezimbili (iminyaka engu-2-7) kanye nebhedi eyodwa (iminyaka engu-0-3) futhi siyajabula ukukubekela yona uma uhamba nezingane.
Kukhona amathoyizi, izincwadi, amabhayisikili amathathu, ibhayisikili elibhalansi, i-sandbox nokunye okufanayo ukugcina abantu abancane bematasa futhi bejabule njengoba behlola indawo yethu ngaphakathi nangaphandle.
Izinto ezimbalwa ezisebenzayo okufanele uziqaphele ngaphambi kokuthi ubhukhe.
Le ndawo inamakamelo okulala amabili namagumbi okugeza amabili, kodwa lawo atholakala ezakhiweni ezimbili ezihlukene (eziseduze komunye nomunye) okungukuthi indlu enkulu kanye nendlu ye-sauna. Imibhede yezingane isendlini enkulu. Ukulala okwengeziwe kwabantu abadala kungahlelwa endlini enkulu ngemali eyengeziwe.
Ukusebenzisa i-sauna kanye nobhavu oshisayo kuhambisana nemali eyengeziwe.
4.94 · 50 okushiwo abanye
Yaziwa njengendawo yase-Cīrulīši yase-Cēsis, idume ngokuba seduze kwayo nesigodi somfula i-Gauja, indawo ebukekayo enamagquma, nemithombo yamanzi ahlanzekile. Le ndawo yase-Cēsis ibidumile ngezindlu zamaholide kusukela ngezikhathi ze-Tsarist Russia futhi ayikushiyi udumazekile namuhla.
Uma ufuna ukuzijabulisa kwangaphandle, vele uphume emnyango ongaphambili futhi ujabulele ukuhamba okumangalisayo noma uhambo lwamabhayisikili emigwaqweni eminingi yemvelo. Qasha isikebhe noma isihlenga futhi ujabulele ezothando zoMfula iGauja; ngokususelwa kule sizini ungakwazi futhi ukujabulela indawo eseduze yokushushuluza kanye nenkundla yethenisi, konke kufinyeleleka kungakapheli imizuzu eyi-15 uhamba ngezinyawo usuka endaweni yethu. I-Spa neRestaurant esezingeni eliphezulu ingafinyelelwa ngezinyawo.
Abanye bangase bafise ukujabulela i-Cesis, elinye lamadolobha enkathi ephakathi amahle kakhulu eLatvia. Idolobha Lalo Elidala liyimizuzu engu-7 nje ukusuka lapho futhi lithuthukisa indawo yamasiko ecacile, okuhlanganisa ihholo lekhonsathi, imibukiso yobuciko, iminyuziyamu, nemikhosi eminingi. Jabulela izitolo ze-boutique zasendaweni, izindawo zokudlela ezihlukahlukene (futhi ezinhle!) nezindawo zekhofi.
UAndzs Ungumbungazi ovelele